रूसी अभिनेता Andrei Bilan: जीवनी, फिलिम क्यारियर र परिवार
हाम्रो आजको नायक - टिभी श्रृंखला र चलचित्र Andrei Bilan को तारा। अभिनेता को व्यक्तिगत जीवन र जीवनी अब धेरै रुचि। हामी आफ्नो व्यक्ति मा आवश्यक जानकारी साझेदारी गर्न तयार हुन्छन्।
Andrei Bilan मा जन्म भएको थियो5सेप्टेम्बर 1968 साल। उहाँले युक्रेन (Nikopol को शहर, निप्रपेट्रोस क्षेत्र) को एक मूल छ। हाम्रो नायक एक वर्ष पुरानो गरिएका तिनका परिवार रूस सारियो। बुबा सुदूर उत्तर मा काम पाइएन। उहाँले आफ्नो पत्नी र छोराको स्थायी सानो छोड्न सकेन, त्यसैले उहाँलाई तिनीहरूलाई लिए।
जीवनको अर्को 10 वर्ष एन्ड्रयू Cherskiy को गाउँमा बिताए। केटा चाँडै कटु climatic अवस्था प्रयोग भयो। उहाँले हिउँ देखेका थिए वर्षको भन्दा। सुरुमा, एन्ड्रयू अक्सर सर्दी। तर समय, आफ्नो शरीर बलियो प्रतिरक्षा विकास भएको छ। साथै, एक वर्ष एक पटक रूस न्यानो क्षेत्रहरु मा छुट्टी मा परिवार जान्छ।
सुदूर उत्तर अवस्थामा बाँचिरहेका 10 वर्ष पछि Bilanovy आफ्नो पैतृक निकोल फर्के। पिता र Andrei को आमा पक्के त्यहाँ बसोबास गर्ने निर्णय गरे।
चासो र क्षमता
स्कूलमा, हाम्रो नायक चौका र फाइभ्स गयो। शिक्षकहरू आफ्नो परिश्रम प्रशंसा र ज्ञान को लागि चाहन्छन्। मा उमेर 12, गम्भीर मार्शल आर्ट रुचि केटा। उहाँले जुडो र स्याम्बो मा एक प्रतियोगिता, टेलिभिजनमा प्रसारण सम्झना छैन खोजे। तर सबै छ। Andrei Bilan आमाबाबुले मार्शल आर्ट खण्डमा उसलाई दिनु उक्साए। फलस्वरूप, यो धेरै सफलता हासिल गरेको छ। पहिले, म बारम्बार प्रतियोगिता जित्यो छन्। दोश्रो, उहाँले मार्शल आर्ट दुवै प्रकारको "खेल को मास्टर" को शीर्षक पाए।
माध्यमिक विद्यालय पूरा गरेपछि Bilan मास्को गए। राष्ट्रपति रेजीमेंट सेवा गर्न भर्ना - आफ्नो लक्ष्य। र यो आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको छ।2वर्ष पछि एन्ड्रयू को नागरिक पठाइएको थियो। हाम्रो नायक मास्को छोड्न चाहेनन्। आखिर, यस शहर मा हामी उहाँलाई ठूलो संभावनाहरु प्रतीक्षा थियो। फिटनेस - युक्रेन देखि कठिन मान्छे एक नयाँ प्रवृत्ति सिक्न निर्णय गरेको छ। सबै राम्रो भयो। उहाँले पनि खेल मा रूस को च्याम्पियन भयो। एक दिन Bilan बुझे कि आफ्नो मुख्य व्यक्तिको पेशा - छैन फिटनेस र दृश्य।
को थिएटर मा अध्ययन र काम
हाम्रो नायक सजिलै स्कूल-स्टुडियो Armena Dzhigarhanyana प्रविष्ट गर्नुभयो। उहाँले पाठ्यक्रम मा सबै भन्दा राम्रो विद्यार्थीहरूको एक मानिन्थ्यो। एन्ड्रयू Bilanovu सजिलो सिद्धान्त र अभ्यास दुवै थियो।
1990 मा उहाँले स्नातक एक उपाधि सम्मानित गरिएको थियो। लगभग तुरुन्त, अभिनेता को मास्को नयाँ नाटक थिएटर, वी Dolgacev द्वारा निर्देशित गर्न दाखिल भएको थियो। साना देखि, को प्रदर्शन मा मुख्य भूमिका दुनिया-प्रसिद्ध लेखक को काम मा सेट गर्न incidental - उहाँले एक लामो बाटो आएको छ।
Andrei Bilan: चलचित्र
जब हाम्रो नायक पहिलो स्क्रिनमा देखियो? यो 1999 मा भयो। यो छोटो फिल्म नेतृत्व भूमिका लागि स्वीकृत "आदम एक टियर छ।" Bilanova देखि फिलिम क्यारियर तेजी विकास गर्न थाले।
2000 मा, आफ्नो सहभागिता साथ दोस्रो फिल्म बाहिर स्क्रीन - "अझै पनि पानी"। एन्ड्रयू एउटा सानो भूमिका शायद दर्शक द्वारा सम्झना कि पायो। तर अभिनेता निराश गरेनन्।
2003 मा उहाँले "Ondine" श्रृंखला गोली निमन्त्रणा गरिएको थियो। Bilan सफलतापूर्वक Toshiko गार्ड को मूर्तिलाई accustomed। निर्देशक को साईट अभिनेता संग सहयोग खुसी थियो। पछि, एन्ड्रयू को श्रृंखला को दोस्रो सिजन मा देखियो।
सम्पूर्ण फिलिम क्यारियर मा, हाम्रो नायक 60 भन्दा बढी टेलिभिजन श्रृंखला र सुविधा चलचित्रमा देखा छ। रूसी दर्शकहरूलाई थाहा र यो कलाकार प्रेम। हामी Andrei Bilanova रूपमा सबैभन्दा ज्वलन्त र स्मरणीय सूची:
"Adventuress" (2005) - Meleshin।
(2006) "प्रतिभा लागि शिकार" - Fedor।
"बिरालो र माउस" (2007) - निकोलस।
"प्रेम को Labyrinth" (2008) - सर्गेई Solovyov।
"Biker" (2010) - सुरक्षा को टाउको।
"गाढा जल" (2011) - एलेक्स।
"देश कथा" (2012) - एक व्यवसायी।
"हार" (2013) - एन्ड्रयू।
"एक सास" (2014) - व्लादिमीर Razlogov।
"सबै दुनिया को सम्पत्तिहरू" (टिभी श्रृंखला 2014)।
Andrei Bilan: प्रेम जीवन
हाम्रो नायक - एक मजबूत मुर्कुट्टा र expressive नजर एउटा आकर्षक मानिस। उहाँले महिला ध्यान को कमी बारेमा गुनासो कहिल्यै। एक चिरपरिचित अभिनेता तीन पटक विवाह गरिएको छ। एन्ड्रयू को पहिलो पत्नी संग उहाँले एक विद्यार्थी रूपमा भेटे। चाँडै मान्नेहरूले विवाह गरेका थिए। यो विजय रूढिवादी गरिएका छ। र देशमा कठिन वित्तीय स्थिति को लागि दोष।
1994 मा, Bilan पहिलो अभिनेता बुबा भयो। पत्नी उहाँलाई एक आकर्षक छोरी क्याथरीन दिनुभयो। युवा बुबा सकेसम्म धेरै एक krovinushku पकड गर्न खोजे। उहाँले bathed र छोरी swaddled। केही समय पछि, अन्द्रियास र पत्नी संग सम्बन्ध deteriorate गर्न थाले। अभिनेता निरंतर उजुरी र डाह दृष्य को थकित छ। फलस्वरूप, जोडी आधिकारिक छोडपत्र।
Andrei Bilan छोटकरीमा स्नातक स्थिति लगाउँथे। उहाँले एक सुन्दर केटी, को सिनेमा र थिएटर छैन सम्बन्धित एउटा रोमान्स अप मारे। महिना को एक जोडी पछि, हाम्रो नायक उनको विवाह को एउटा प्रस्ताव गरे। त्यो हो भन्नुभयो। प्रत्यक्ष संगीत र टेबल मा व्यञ्जनहरु र अतिथि को एक ठूलो संख्या संग - यो समयमा विवाह भव्य थियो। तर परिवारको आनन्द लामो पछिल्लो थिएन। फेरि छोडपत्र ले पछि लागे।
2007 मा, Ruza अभिनेता को शूटिंग को समयमा म एउटा सुन्दर श्यामला Angelica भेटे। त्यो दोस्रो निर्देशक रूपमा काम गरे। त्यो तुरून्त मास्को जाने थियो। Bilan एंजेला दयालु आफ्नो मद्दत प्रस्ताव राखे। राजधानी बाटो मा तिनीहरूले कुरा। पनि त यो आफ्नो अन्य आधा थियो एन्ड्रयू Bilan बुझे। हाम्रो नायक रेस्टुरा मा रोमान्टिक डिनर लागि Angelica भनिन्छ। केटी सहमत भए। Rendezvous उच्चतम स्तर मा भएको थियो। चाँडै तिनीहरूले नै छत बाँच्न थाले। र एंजेला उनको गर्भावस्था बारेमा अभिनेता भन्नुभयो, दम्पतीलाई registrar गए र हस्ताक्षर गरे।
2008 मा पत्नी एक छोरा Bilanovu जन्म दिए। केटा इल्या नाम। तपाईं हाम्रो नायक आफ्नो पहिलो विवाह देखि छोरी, धेरै गलत बारेमा भूल ठान्छन् भने। उहाँले अक्सर केटी कुरा, नैतिक र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न, यात्रा गर्न उनको परिवार लिए।
अब तपाईं उहाँले जन्म भएको थियो जहाँ, उहाँले अध्ययन र जो फिल्म अभिनेता ए Bilan गोली थियो थाहा छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि हामीलाई समीक्षा भएको थियो। हामी यो अद्भुत कलाकार सफलता र वित्तीय राम्ररी गर्दा अनि परिवारको आनन्द इच्छा!
Alejandra Maldonado जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन
सिनेमा "Nescafé" IMAX - उच्चतम स्तर मा चलचित्र को खुशी
यो त्रास फिलिम "Sinister 2": समीक्षा, अभिनेता र भूमिकाको
Korat - बिरालो आनन्द
सपना व्याख्या: के क्यान्सर सपना
Filmography दानव Hogan - खेलाडी वा अभिनेता?
फेसन ब्लगर Chiara फेरांड: जीवनी, पेसा, व्यक्तिगत जीवन
किशोरों मा Varicocele: कारणहरू, उपचार, नतिजा
मोन्टसेराट (स्पेन) को मठ। ब्ल्याक मैडोना र अन्य रुचिहरु को प्रतिमा
इटाली गरेको अर्थव्यवस्था के हो
सर्वनाम: उदाहरण। Possessive सर्वनाम - उदाहरणका। Demonstrative सर्वनाम - उदाहरणहरू
गोली IdeaTab लेनोभो A3000 1: सिंहावलोकन, विनिर्देशों र समीक्षा
समलिङ्गी Gannik - gladiator चलचित्र वर्ण र आफ्नो समय को एक नायक
Calves लागि अभ्यास